विमल गुरुङपक्षका प्रभावशाली नेताहरू निस्किए मैदानमा:दार्जीलिङको राजनैतिक समाधान अवश्य हुनेछ-राजु विष्ट - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारविमल गुरुङपक्षका प्रभावशाली नेताहरू निस्किए मैदानमा:दार्जीलिङको राजनैतिक समाधान अवश्य हुनेछ-राजु विष्ट
कालेबुङ, 29 मार्च:105 दिनको को पहाड बन्दपछि अहिलेसम्म निष्क्रिय बनेका गोजमुमो विमल गुरुङ पक्षका कालेबुङका प्रभावशाली नेताहरू अचानक सक्रिय भएका छन्। आज भाजपा उम्मेद्वार कालेबुङ आएको क्रममा अचानक गोजमुमोका प्रभावशाली नेताहरूमा मोर्चाका संस्थापक सदस्य विजय सुन्दास, पूर्व सभासद डा. आर बी भुजेल, सीपी पौडयाल, गोपाल रूचाल, नगरपालिकाका पूर्व अध्यक्ष शुभ प्रधान, प्रो. कल्याण देवान, नारी मोर्चाबाट बन्दना योञ्जन, बबिता शर्मा लगायतका दर्जनौँ नेताहरू सक्रिय भएका हुन्।
गोरामुमो अनि गोजमुमो समर्थित भाजपा उम्मेद्वार आज कालेबुङ आएको अवसरमा यी नेताहरू सक्रिय बन्दै चुनावी मञ्चमा देखापरे। यसअघिसम्म उनीहरू निष्क्रिय थिए।
चुनाव प्रचारको क्रममा कार्यकर्ताहरूसित भेट गर्न आज भाजपा उम्मेद्वार राजु विष्ट कालेबुङ आएका थिए। उनलाई सिलगढीदेखि कालेबुङ आउने क्रममा बाईकमा सवार कार्यकर्ताहरूले जय विमल, जय गोर्खाल्याण्डको नारा लगाउँदै कालेबुङ भित्राएका थिए। उनलाई राजमार्गको विभिन्न ठाँउमा स्वागत जनाइएको थियो।
कालेबुङ भित्रिने क्रममा उनले9माईलस्थित जङ्गबीर सापकोटाको मूर्ति एवं 10 माईल स्वामी विवेकान्दको मूर्तीमा पूजा एवं नमन गरे। यसरी नै उनले यहाँको सेवा सदन परिसरमा रहेको हनुमान मन्दिरमा पनि पूजा अर्चना गरे।
यसपछि मारवाड प्यालेसमा भाजपा एवं समर्थित पार्टीका कार्यकर्ताहरूमाझ कर्मी सभा सम्पन्न भएको थियो।
सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भाजपा उम्मेद्वार राजु विष्टले दार्जीलिङको राजनैतिक समाधान अवश्य हुने प्रतिवद्धता जाहेर गरे।
‘दार्जीलिङको दीर्घमियादी राजनैतिक समस्या छ, त्यसको राजनैतिक समाधान यसपल्ट दार्जीलिङले अवश्य पाउनेछ’-विष्टले भने, ‘त्यो समाधान के हुन्छ मेनिफेस्टोमा आउँछ।’
पहाडको स्थायी समाधान जुन प्रक्रिया र स्वरूपमा हन्छ त्यसले यहाँका सबै मानिसहरूलाई साथमा लिएर हिँड्ने उनले बताए।
अहिलेसम्म भाजपाले पहाड हितको निम्ति काम नगरेको प्रसङ्गमा उनले भने, ‘भाजपाले जे भनेको छ, त्यो गरेको छ। हरेक कामको एउटा समय हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ। कतिवटा काम हुँदैछ, कतिवटा हुन बाँकी छ।
उनले यसपल्ट भजपाको निम्ति विकास अनि राष्ट्रको सुरक्षा सर्वोपरि रहेको बताए। उनले पहाड र सिलिगुढी संवेदनशिल क्षेत्र भएकोले राष्ट्रको हितलाई पनि ध्यानमा राख्दै राजनैतिक समाधान दिनुपर्ने विचार पोखे।
उनले कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीप्रति आक्रोश पोख्दै 1 महिना पहाड बन्द हुँदा 1 हजार करोड रुपियाँको नोक्सानी देखाउने राज्य सरकारले पहाडलाई 1 वर्षमा4सय देखि5सय करोड रुपियाँ दिइरहेको बताए। उनले पहाडको भएको धनराशी बङ्गालमा भ्रष्टचार गर्न काम आइरहेको बताए।
उनले गोर्खाको निम्ति कसैले केही गर्नसक्छ भने त्यो भाजपा सरकार रहेको भन्दै चुनाउ जित्ने दावी गरे। उनले आफू संसद भएको खण्डमा संसदीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने बताउँदै बङ्गालले गर्न नसकेका समस्याहरू उठान गरेका थिए।
भाजपा जिल्ला अध्यक्ष मनोज देवानको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभालाई गोरामुमो नेता एनबी छेत्री, गोजमुमो नेता विजय सुन्दास, गोजमुमो कार्यकारी अध्यक्ष डा. लोप्साङ लामा, गोरामुमो नेता निरज जिम्बा, गोजमुमो प्रवक्ता बीपी बजगाईँ आदिले सम्बोधन गरेका थिए। सभापछि विष्टले यहाँको शहीद वरूण भुजेलको घरमा पुगेर उनका परिवारसित पनि भेट गरे।